Flutter ichaunza maapplication ayo kuLinux nechibvumirano pakati peGoogle neCanonical | Linux Vakapindwa muropa
Rinopfuura rinopfuura gore rapfuura tinotaura newe kubva kuFlutter, yemahara uye yakavhurwa sosi mushandisi yekuvandudza dhizaini inouya yakananga kubva kuGoogle's Idea Fekitori. Pakati pezvimwe zvinhu, inoshandiswa kugadzira maapplication eApple neIOS, uye zvakare kugadzira kunyorera kweFuchsia yekambani imwe chete. Maawa mashoma apfuura, iyo kambani yeyakakura yekutsvaga injini neCanonical yakazivisa chibvumirano chinobvumidza maapplication e Flutter svika kuLinux.
Chibvumirano neCanonical chichaguma nechikamu icho vamwe vashandisi vangangodaro vasingadi: vagadziri vanofanirwa kugadzira maapps avo vovaendesa kuSnapcraft, ndiko kuti, ivo vachazove inowanikwa seyenyore kurongedza. Uye ndezvekuti vazhinji vedu tinofarira Flatpak mapakeji, uye kunyange Linux Mint yakabvisa zvachose snapd zvakanyanya nekuti vanomutora seanodzvinyirira kubatanidzwa nekambani inomhanya naMark Shuttleworth.
1 Flutter maapplication achave achiwanikwa seSnap mapakeji
2 Linux rutsigiro
3 Zvinowanikwa nemushandisi wekupedzisira
Flutter maapplication achave achiwanikwa seSnap mapakeji
Tim Sneath, maneja wechigadzirwa weboka reFlutter, anoti uku ndiko kufambira mberi kukuru nekuti masisitimu eUI haawanzo simba uye akaringana zvakakwana kuti sisitimu yekushandisa ivimbe nayo. Zvakataurwa kuti Windows yakanyorwa muC ++ pane .NET, kunyangwe maapplet akaita seCalator. Sneath anotendawo kuti izvi zvinoratidza izvozvo Canonical inoda kuisa mari nenzira yakakomba uye yakazvipira kugadzira mafomu eLinux, ichiita Flutter paLinux chikamu chepamutemo cheUbuntu. Pamusoro pezvo, makambani anonzwa aine chivimbo achisarudza Flutter - hwakazve humbowo hwekureba kwayo uye kugona kwehunyanzvi, zvese maererano naSneath.
Flutter yakatanga se nharembozha ui furemu open source iyo inobatsira vanogadzira kuvaka yemukati nzvimbo yeApple neIOS. Nekudaro, kubva Chivabvu 2019, Flutter yakabvumidza vagadziri kuvaka desktop, yakadzamidzirwa, nhare, uye webhu kunyorera kubva kune imwecheteyo kodhi base. Vagadziri vanogona kushandisa Flutter pamafoni, mawoko akabatwa, mahwendefa, desktops, malaptop, materevhizheni, uye akangwara maTV kana kuratidza.
Iri basa rinosanganisira kuwedzerazve kugadzirisa kweinjini kutsigira desktop -style keyboard uye mbeva yekuisa, pamwe neepamusoro-chikamu resizable windows. Inosanganisira zvekare hunyanzvi hweUI hwakakodzerwa nedesktop, senge Material Density rutsigiro uye NavigationRail uye kuyedza nekubatanidzwa kwakadzika mune iri pasi desktop desktop ine kuyedza muDart: FFI uye menyu bar yekuwana. System uye yakajairwa dialog mabhokisi. Zvese izvi basa raive rekuona kuti, pamusoro pekuve yakakodzera kune mbozha-dhizaini zviitiko, Flutter yakagadzirira kubata iyo yekutanga yakazara-saizi desktop desktop.
Kana zviri zveCanonical, kambani zvakare inotarisira kuti kufamba uku kuchakoka vanogadzira kuti vauye sarudza Snap mapakeji paunenge uchigadzira zvaunoshandisa. Parizvino, ivo vanokwikwidza iyo Flatpak, asi vagadziri vazhinji vanosarudza kuendesa maapplication avo kuFlathub pamusoro peSpapcraft. Uye kune zvakare vazhinji vedu vanosarudza Flatpak kunyorera pamusoro peSnap, nekuda kwezvikonzero zvakaita sekuti vanogadziridza nekukurumidza kana kuti vanowanzoita kunge mvura.
Zvinowanikwa nemushandisi wekupedzisira
Pakutanga, akasiyana siyana ekushandisa. Kana mugadziri akagadzira Anwendung, chaanofarira ndechekuti inosvika kune akawanda madivayiri sezvinobvira uye, zvishoma zvaanofanirwa kugadzira, zvinomuitira iye. Mune mamwe mazwi, kana mugadziri akagadzira Anwendung yakavakirwa paFlutter uye, iine shanduko shoma, inogona kushandiswa paIOS, Android, pakombuta uye ikozvino paLinux, ivo vanozowana mukunyaradzwa, uye isu tichava nesarudzo iripo iyo pasina chibvumirano chakaziviswa nhasi hazvingagone.
Zvino chete isu tinofanirwa kumirira imwe nguva kuti tione kuti zvese zvinoshanduka sei ichi. Ehezve, inofanirwa kujekeswa kuti hapana chakatsanangurwa apa chinoreva kuti zvizvarwa zveApple kana iOS maapplication anosvika kuLinux.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Canonical neGoogle mudiwa kuunza Flutter maapps kuLinux
Mario Castro Fontemachi akadaro
Nhau huru !! Ndinovimba ine nheyo dzakasimba uye ichagara nekufamba kwenguva. Flutter inoshamisa, ndinoida!
Pindura kuna Mario Castro Fontemachi
Idzi ndidzo dzakanakisa nhau dzeakasara egore, Dart uye Flutter runako chose.